China Plant and crop climbing net mpanamboatra mpanamboatra sy mpamatsy | Kede Netting
harato kôkômbra, harato asparagus, harato ovy, harato voatabiha, harato voatabiha, harato voanjo, harato maitso
Ity vokatra ity dia mamela ny zavamaniry hiakatra tanteraka sy hitombo amin'ny alàlan'ny lamba harato, izay afaka manatsara ny kalitao sy ny vokatra azo avy amin'ny vokatra, ary mampihena ny ampahany betsaka amin'ny asa sy ny fitaovana fanampiny. Karazana vaovao amin'ny fampiasana fambolena mitsitsy sy mahomby indrindra izy io. harato
Ny vokatra dia mora ny mametraka, mora ny mivelatra, mba hiantohana ny zavamaniry jiro sy ny rivotra, mora ny maka fototra, fanetezam-boaloboka, mba hamitahana ny zavamaniry hianika, ny tariby tanjaky ny ambony, dia tsy mora ny hianjera, ary afaka mahazo tsara. voankazo.
1) Ny rafitra toy ny harato, ny famokarana indostrialy miaraka amin'ny akora molekiola avo lenta, matanjaka sy mateza, mahatohitra asidra sy alkali, ary tsy mora ny taona;
2) Ny fitaovam-pamokarana harato mitaingina dia azo ovaina sy ampiasaina indray, izay tena mahasarika ny tontolo iainana;
3) Ny rafitra manontolo dia miforona amin'ny fotoana iray; tena mety ny manohana;
4) Ny haavony sy ny halavan'ny tohatra fiakarana dia azo amboarina amin'ny fomba tsy ara-dalàna araka ny karazana voavoly sy ny hakitroky ny fambolena;
5) Amin'ny fampiasana an'io vokatra io, ny zavamaniry iray dia afaka mahatratra fitarihana iray, ary tsy maharitra izany. Ny tontolo iainana tsara amin'ny rivotra dia miforona eo anelanelan'ny zavamaniry, sampana ary ravina ary ao anatin'ny karazana zavamaniry, izay mampiroborobo ny fivoaran'ny zavamaniry ary mampihena ny fisian'ny aretina. , Arakaraka ny ela ny fiainana fanompoana, dia ho mafy kokoa ny otrikaretina, ary ny rivotra fanoherana dia ho malemy, ka mahatonga ny talantalana hianjera mandritra ny vanim-potoana fitomboana, ka miteraka fihenam-bidy na tsy misy fijinjana);
6) Ny ravina dia mankafy ny tara-masoandro feno, manatsara ny photosynthesis, ary manatsara ny kalitao sy ny vokatra;
7) Fambolena sy famafazana mety, ary mamonjy zezika sy fanafody;
8) Izy io dia mety indrindra amin'ny fiompiana zana-kazo misy karazany manana fitomboana malemy amin'ny dingana voalohan'ny zana-kazo, toy ny fanafody volomparasy na zana-boankazo.
9) Ny fampiasana an'io fitaovana io dia afaka mamonjy asa sy ezaka, mampihena ny fandaniana ary mampitombo ny famokarana sy ny fidiram-bola.
harato (mm) 18,24
Halavany (mm)　 18,30,36, namboarina
sakany (mm) 1.8,2.1,2.4, namboarina
● Ny rivotra sy ny jiro tsara, ary ny kalitaon'ny voankazo dia tena tsara;
● Mora chit core, fanetezam-boaloboka;
● Avo be ny kofehy harato ary sarotra simba.
teo aloha: Mpanamboatra hazo fihinam-boa tsara kalitao sy harato fiompiana vorona
Manaraka: Manampahaizana manokana amin'ny famokarana mpanamboatra harato fambolen-kazo
harato ho an'ny fiakarana voaloboka
Ny mpanamboatra net alokaloka avo lenta dia manakana ny gl ...
Mpanamboatra harato-tena avo lenta amin'ny vovoka ...